काठमाडाैं । नुवाकोटकी शान्ति र अर्जुन (नाम परिवर्तन) पाँच वर्षसम्म लिभिङ टुगेदरमा बसे। मजदुरी गर्दै हिँडेका उनीहरू कालिमाटीमा भेट भएपछि सँगै जीउने सँगै मर्ने वाचा कसम खाए। आर्थिक रूपमा अलि सम्पन्न भएपछि विवाह गर्ने भन्दै अर्जुनले शान्तिलाई थमथमाउन थाले। सँगै बस्दा उनीहरूका दुई सन्तान पनि भए। शान्तिलाई छाडेर अर्जुन अर्की युवतीसँग बस्न थाले।
जेठाजुसँग बुहारीले अवैध सम्बन्ध राखेपछि...
गौशाला । गत शनिबार महोत्तरी जिल्लाको सोनमा गाउँपालिका वडा नम्बर ७ सुन्दरपुरमा जेठाजुसँग बुहारीले अवैध सम्बन्ध राखेको आरोप लगाउँदै वडा अध्यक्षले जेठाजु र बुहारी दुवै जनालाई हातखुट्टा बाँधेर चरम यातना दिएपछि दुवै महिला, पुरुष गाउँबाट विस्थापित भएका छन् । सोनमा गाउँपालिका–७ सुन्दरपुरका वडा अध्यक्ष महेश (महेशी) यादवले स्थानीय ५५ वर्षीय इसराफिल बैठा धोबी र उनका भाइ बुहारी ३५ बर्षीया सैरुल खातुनलाई वडा कार्यालयमै ल्याएर हातखुट्टा बाँधी कुटपीट गरेर चरम यातना दिएपछि बुधबारदेखि उनीहरु घरबाट हराएका छन् ।
भुलेर पनि यी स्थानहरुमा यौन सम्बन्ध नबाउनुहोस्
एजेन्सी । शास्त्रका अनुसार शारीरिक सम्बन्ध का लागि विभिन्न नियमहरु का बारेमा बताईएको छ। शास्त्रमा यो पनि बताइएको छ कि कुन कुन स्थानमा शारीरिक सम्बन्ध राख्नु हुदैन र त्यस बाट मानव
यी हुन् सर्वाधिक सुखद् यौन जीवन भएका १० देश, अस्ट्रेलिया भारतभन्दा पछाडि !
एजेन्सी । सबैभन्दा बढी यौन सन्तुष्टि कुन देशका मानिसहरुले प्राप्त गर्छन्, होला? यो प्रश्नमा पक्कै पनि तपाईंको उत्तर खुला समाज भएका कुनै पश्चिमा देश हुन सक्छ ।
सेक्स रोबोट ‘हार्माेनी’ले भुलाउनेछ दुनियाँलाई !
मस्ती र मनोरञ्जनको दुनियाँमा प्रविधिले अझ रोमाञ्चकता थपिदिएको छ । यसैको पछिल्लो उदाहरण हो ‘हार्माेनी ३.०’ ।
जब रात पर्छ तब महिलाहरु पनि सेक्सका लागि रोमान्टिक मुड बनाउने गर्छन् । हालसम्म महिलाहरु लाजका कारण रातमा सेक्स गर्न रुचाउने गरेको कारण बताइदै आइएको थियो ।
सम्भोवले भगवानप्रति आस्था बढाउँछः अनुसन्धानकर्ता
बिबिसी । कार्यस्थलमा हुने यौन दुर्व्यवहारविरुद्ध लड्न ३ सयभन्दा बढी अभिनेत्री, महिला निर्देशक र मनोरञ्जन उद्योगका कार्यकारीहरूले संयुक्त राज्य अमेरिकामा एउटा अभियान थालेका छन्।
कसरी बनाउने सेक्सका लागि अचानक मूड ?
स्वस्थ यौन सम्पर्क दाम्पत्य जीवनमा खुसियाली ल्याउन महŒवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ । यदि सेक्स सम्बन्ध आपसमा राम्रो छ भने व्यवहारिक सम्बन्ध पनि राम्रो हुन्छ तर स्वस्थ यौन सम्पर्कको अभावमा जीवनमा रुखोपन आउन सक्छ ।